अन्तर्वार्ता – Online Jagaran
सुर्खेत, ५ असार (जागरण) । नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले तत्काल तीन मन्त्रीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो । संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीहरू अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पदबाट राजीनामा गर्न निर्देशन दिन भनेको छ । एमालेका तीन जना सांसदले वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत […]
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्येको एउटा जिल्ला हो कालिकोट । कालिकोट शुभकालिका गाउँपालिकामा २९८१ घरधुरी, कुल जनसंख्या १७९२० रहेको छ । सक्रिय उमेरका ४२ प्रतिशत युवाहरु मध्ये ५५ प्रतिशत रोजगारीको लागि भारत लगायत अन्य खाडी मुलुकमा गएर काम गर्न बाध्य छन् । शुभकालीका गाउँपालिका जल जंगल, खनिज, जडीबुटी, वन्यजन्तु, पशुपालन, अन्नबाली, फलफुल र ठुलो मानविय […]
सुर्खेत, १ पुष (जागरण) । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कर्णालीका भूमिहिन सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । आयोगले कर्णालीका १५ पालिकामा रहेका भूमिहीनहरुको वास्तविक लगत संकलनका लागि जनप्रतिनीधिहरुसंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । कर्णालीका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्न समझदारी गरिएको छ । भूमि सम्बन्धी […]
कृति सुवेदी । सुर्खेत, ३० जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ । अव प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा छ । कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिक्रिया र अव आउने बजेट सन्दर्भमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको भनाई के छ त ? जनतासँग जनप्रतिनिधिमा हामिले रुकुमपश्चिमको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रनम्वर १ का […]
२९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०७:१६ June 11, 2020 जागरण
कृति सुवेदी । सुर्खेत, २९ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ । अव प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा छ । कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिक्रिया र अव आउने बजेट सन्दर्भमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको भनाई के छ त ? जनतासँग जनप्रतिनिधिमा हामिले जुम्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट […]
नन्द कठायत । सुर्खेत, २८ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ । अव प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा छ । कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिक्रिया र अव आउने बजेट सन्दर्भमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको भनाई के छ त ? अब आउने आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा कस्ता […]
२४ जेष्ठ २०७७, शनिबार १७:४५ June 6, 2020 जागरण
कृती शुवेदी । सुर्खेत, २४ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ । अव प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा छ । कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिक्रिया र अव आउने बजेट सन्दर्भमा प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कंडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के […]
नन्द कठायत । सुर्खेत, २४ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ । अव प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा छ । कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिक्रिया र अव आउने बजेट सन्दर्भमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको भनाई के छ त ? हामिले कालिकोटको प्रदेश सभा (क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य […]
कृति सुवेदी । सुर्खेत, २३ जेठ (जागरण) । संघीय नेपालका तीन तहका सरकारहरुमध्ये केन्द्र सरकारले हरेक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ भित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । जसअन्तर्गत केन्द्र सरकारले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको […]
कृति सुवेदी । सुर्खेत, २२ जेठ (जागरण) । संघीय नेपालका तीन तहका सरकारहरुमध्ये केन्द्र सरकारले हरेक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ भित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ । जसअन्तर्गत केन्द्र सरकारले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित समेत भइसकेको […]